कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य दिपक गिरिले भने-भालुवाङबाटै प्रदेशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरौ - Jagaran Online
दाङ,२१ असोज । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य दिपक गिरिले प्रदेश नम्बर. ५ को नाम लुम्विनी प्रदेश र राजधानी दाङ देउखुरीको भालुवाङमा राख्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले जनतालाइ पायक पर्ने ठाउमा राजधानी कायम गरेकोमा प्रदेस सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
उनले प्रदेश राजधानीको स्वागत गर्दै अव देउखुरीको भालुवाङबाटै प्रदेशको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गरेका हुन । पुर्बमन्त्री समेत रहेका गिरिले फोनमा कुराकानी गर्दै प्रदेश स्थापना भएको लामो समयपछि प्रदेश नं. ५ को राजधानी दाङ ल्याउने निर्णयले प्रदेशलाई न्याय गरेको समेत बताए ।
उनले दाङ प्रादेशिक राजधानी बनाउन भूमिका खेल्ने सवैलाई धन्यावाद ज्ञापन गर्दै अव देउखुरीको भालुवाङमा संरचना निर्माणका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन । त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई नेपाली कांग्रेस र दाङले सहयोग तयार रहेको समेत बताए ।
सुरक्षाकर्मीलाई मञ्चद्वारा मास्क र सेनेटाइजर सहयोग